Baaq ay waxgaradka Soomaaliyed ee ku dhaqan Dalka Kenya kasoo saareen xaalada wadanka Soomaaliya.
Sawirada Kulanka Nairobi halkan ka daawo....
Kulan balaaran oo ay soo qaban qaabiyeen wax garadka Somaliyed ee ku dhaqan Wadan Kenya, ayna kaso qeyb galeen Culumo owdiinka. Aqonyahanada. Oday dhaqamedyada. Gudiga Ganacsitada Islii. Ayaa kadhacay niskii danbe Maalinimidii Jimcaha aheyd Holka kulamada ee kuyaalo xaafada Istareha laguna magacaabo Sir Ali Muslim Club.
Kulankaan ooy kasoo qeyb galeen Boqolaal dad kor udhaafaayo ayaa waxa uu bilaawday abaaro Sadexdii Galabnimo ayadoo uu ugu horeyn ku furay Ayadaha Qur'an ka Sh. C/casiis , inkastoo ay jireen dad katirsanaa kasoo qeyb galayaasha oo anan markii hore lasoconin waxa uu ku saabsan yahay kulankaas hadana waxa sharaxaad badan oo ku saabsan kulanka kasheegay halkaas C/kariim Sabriye Maxamed oo kamid ahaa qaban qaabiyaasha madasha, waxuna shegay in kulankaan uu quseyo kaliya kahadalka arimaha nabada Somaliya. Asagoona yiri waxaan rabnaa in aan darenkeena uwecino dadaalada nabadeed ee loowado Somaaliya xalkana logu raadinayo.
qodobka kale oo uu sheegay in asagana laga hadli doona ayaa waxa uu ahaa colaada somaliya kajirto oo labaatan jirsatay.
Sikastaba ha ahaatee mar qura ayey dadkii kasoo qeyb galay kulankaas ay joojiyeen shanqarta kadib markii makarafoonka lagu casuumay Sheekh Nuur Baarud Gurxan oo kamid ah mashaa iqiinta waweyn ee Soomaaliyeed lana sheegay in shirkaan dartiis uu oga yimid Magaalada Gaarisa ee xarunta u ah Gobalka Waqooyi Bari Kenya.
Ugu horeyntii waxa uu ka hadlay Sheekhu Awaamirta ay leedahay Bishaan bara keysan ee Ramadaan kadibna waxa uu guda galay in uu kashekeeyo Midnimada Qiimaha ay ledahay Asagoona sheegay in kaliya lagu midoobi karo Xariga Eebe, waxa uuna sidoo kale ugu baaqay Sheekhu mar uu kahadlaayay qilaafka udhaxeeyo Ururka Isbaheysiga dib uxoreynta Somaliyed in ay so celiyaan midnimadii dhexdooda aheyd waxuuna yiri "qilaafku dhexdiina ah marka aan maqalno dhagahena ayu wax udhimayaa" Sheek Nuur Baaruud Gurxan ayaa mar uu ka hadlayay heshiiskii Jabuuti ay ku gaareen garab katirsan isbaheysiga dib uxoreynta somaliya iyo Dowlada FKMG ee Somalia waxa uu yiri sh.asagoo ku hadlayay tanaasulka "sow umada in loo tanaasula ma'ahan, Xabashidaan dhibka badan ee mudada labada sano ku dhow nakorsaaran hadii ay afar bilod ku baxeyso wax lagu diido anagu garan may" sheekha ayaa tilmaamay in hadii ay xabadu waligeed ha sacoto dadkuna ha baaba'aan hadi ad Diin udagaalameysid yaa Diinta la bari hadii ay dadku dhamaadan taas ayuuna su'aal iska weydiiyay sheekhu mar uu ku booriniyaay dadku in ay midnimadood.
Sikastaba ha ahaatee ayadoo ay shirkaan kasoo qeyb galeen Culumo owdiin sumcad ku leh bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda ayaa hadana waxaan kamaqneyn Macalimiinta iyo Ururka Ganacsatada Somaliyed ee kadhisan xaafadaan islii waxaan meshaas kahadlay gudomiye ku xigeenka Easleigh Business Committee, Xuseen Maxamed Aar waxeyna qeyb weyn ka qaateen ganacsatadu qabsoomida shirkaan maadaama ay ayagu yihiin ururka ugu awooda badan ee hada xaafadaan kajiro, sida ay sheegeen qaar kamid ah qaban qaabiyaasha kulankaan.
Inkastoo ay casuumada makarafoonka ay aheyd mid wareygeeyso oo hadba qof lagu soo dhaweynaayo waxaa asna meeshaas hadalo qimo badan ka yiri Hasan sheekh Cali oo lagu naaneyso (Big man) kana mid ah macaliminta ugu magaca weyn wadankaan Kenya asagona inta badan kasheekeyay qiimaha ay nabadu leedahay waxaana sidoo kale kahadalay meesha.
Oday dhaqamedyo iyo ugaasyo uu kamid ahaa Ugaas Cismaan Ugaas C/dule oo kasheekeyay dagaaladii soomaliya iyo itoobiya dhex maray 1964 iyo 1977 asagoona sheegay in uu asagu ka qeyb qaatay kii 1964 uuna yaqaano itobiyo iyo waxa ay tahay, waxa uuna yiri "Anigu kama baqaayo in Itoobiya ay Soomaaliya sii haysato, laakin waxaan ka baqayaa in aay Dadka Soomaaliyed is dagaalaan marka ay Itoobiya kabaxdo wadanka Soomaaliya kadib".
Ugu danbeyntii ayadoo uu soo gaban gaboobay Kulankaas xili danbe oo galabnimadii Jimcaha ayaa halkaas waxa ka aqriyay Baaq ay soo saareen wax garadka soomaaliyeed ee ku dhaqan Wadanka Kenya Ustaad Cali xoogsade. Baaqaas oo ku aadanaa arimaha nabada Somalia ayaa waxa uu uqornaa sida tan.
C/salaam Maxamed Cali (najax).